Amazon DynamoDB vs MongoDB - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Mumakore mashoma apfuura, takaona shanduko huru yemaitiro munzvimbo yedatabase. Imwe nzira itsva iri kubuda yanga iri kushandiswa kwe NoSQL ("kwete chete SQL"). NoSQL yakauya mumufananidzo apo Developers akaziva kudiwa kwe Agile Delivery system iyo inokwanisa nyore kugadzirisa isina kurongeka data. Iyo sisitimu yaifanirwa kuve yakasimba uye ine hukama dhatabhesi haina kunyatso kucheka. A hukama Database modhi inogona kunge isiri iyo yakanakisa mhinduro kune ese mamiriro. Imwe nzira, yakawanda "gore-friendly" nzira yaive yekushandisa NoSQL pachinzvimbo. Apa ndipo Amazon DynamoDB uye MongoDB inouya inoshanda.
NoSQL inzira nyowani yekufunga nezve databases. Haisi hukama Database. MongoDB, inonyanya kuzivikanwa ye NoSQL kupa, inoshandisa muenzaniso wemagwaro. A MongoDB Database inobata muunganidzwa unova seti yemagwaro. Mapepa akaiswa uye arrays anoderedza zvinodiwa zvekujoinha, yakakosha parameter yekushanda kwepamusoro uye kumhanya.
MunaJanuary 2012, Amazon vakazivisa yavo NoSQL service, DynamoDB. Kunyangwe isiri yekutanga muligi, ichokwadi shanduko yemutambo. Vanhu vazhinji vanofunga nezveMongoDB seye epitome ye NoSQL nekuda kwekureruka kwekushandisa zvichienzaniswa nemamwe dhatabhesi. Asi ine zvipingamupinyi zvikuru maererano ne Data management.
5 maficha eAmazon DynamoDB ayo anomanikidza zvakanyanya kana achienzaniswa neanokwikwidza nawo:
Kuwedzera kushandiswa kwe analytics to a Database zvanga zvisiri nyore. Zvakanaka, isu taingoda kutumira chikumbiro kune Database uye ita kuti idzosere mhinduro kana yagadzirira. Asi zvese NoSQL Database yakundikana munyaya iyi. MongoDB ine mipimo mikuru kana uchimhanyisa mepu-kuderedza mabasa.
Kune rimwe divi, DynamoDB inosangana neElastic Mepu Kuderedza uye inoderedza kuomarara kwekuongorora isina kugadziriswa data. Ichi chiBIG kuwedzera
2. Relaxed vs Strong kuenderana
ne Amazon DynamoDB, hapana chikonzero chekuomesera kudzokorora kwemaitiro. Kana ukangoita sarudzo, zvinhu zvose zvinoshanda sezvazvinofanira. Sevose Amazon zvigadzirwa zvinopihwa, kuverenga nekunyora zvikamu zvinogona kugadziridzwa zvichienderana nekushandiswa chaiko. Mukuona kwedu, hapana chinokunda izvi!
3. Kusununguka kwekutanga
Amazon inopa kutyisidzira chaiko kumakwikwi nekupa mhinduro inogarwa. Kana iwe uine AWS account, kutanga neDynamoDB kuri nyore sekuita imwe API kufona! Nevamwe NoSQL mhinduro, mugadziri anofanirwa kuve nemaseva akakodzera, kuisirwa uye zvigadziriso. NeDynamoDB, ivo vanongoda kutarisisa nezvekushandisa uye kurega AWS inobata zvimwe.
Amazon, seAWS, inopa kuita kunoshamisa neDynamoDB. Ivo vanopa single digit latency kunyangwe pamitoro inorema kwazvo. Yese dhata inodzokororwa pamwe chete munzvimbo dzese dziripo UYE HAPANA nguva yekudzikira kunyangwe paine zvigadziriso zvekubuda! Iko kushandiswa kwemaSSD ishanduko chaiyo yemutambo wekuverenga zvisina tsarukano uye kugadzirisa.
5. Bhadhara kuti ushandise
Amazon inoita kuti iwe utenge mashandiro pasekondi kugona pane CPU maawa kana nzvimbo yekuchengetera. Izvi zvinobvisa kuomarara kwakawanda kwe Developers ndiani angangoda kuimba iyo Database kumisikidza, tarisa mazinga ekuita, kukwidza zviwanikwa zvehardware kana zvichidikanwa. Izvi zvinopa vashandisi nzvimbo inokurumidza uye yakavimbika yekuchengetedza yezvido zvavo nemitengo inokwira muchikamu chakananga kudiwa.
Nezvayo zvese zvakanakira, kunyangwe tikafunga mashoma mashoma DynamoDB inawo, sechigadzirwa chinouya pedyo nekuzadzisa chivimbiso che NoSQL zvichienzaniswa nevakwikwidzi vayo: Nyore-kushandisa-yakarongeka chengetedzo pasina kuoma kwekugadzirisa SQL maseva uye kuvimbika uye kuita mabhenefiti ekuyera kunze.
Kuronga Dhatabhesi Kuenda kuAurora
Amazon Aurora ndeye MySQL inoenderana nehukama hweinjini dhatabhesi iyo inosanganisa iyo kumhanya, kuwanikwa, uye chengetedzo yeakakwira magumo ekutengesa dhatabhesi.